China Chain ပေါ်တင်စက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Yuantuo
ကွင်းဆက်ပန်းကန်သယ်ဆောင်သည်မမှန်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူရန်ကွင်းဆက်အပြားပေါ်ကိုသယ်ဆောင်သူများ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သံကြိုးများကြားရှိပြားအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးကရိယာကွင်းဆက်ပန်းကန်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ စက်မှုထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရေးလိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကွေးသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကိုနားလည်နိုင်သည်။ ကွင်းဆက်သယ်ဆောင်သူများ၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်များ: ၁။ ကွင်းဆက်အစေး: စံတင်စက်ကွင်းဆက် ၂။ ပြားကွင်းဆက်၏အကျယ် - 200-1200mm 3. သယ်ဆောင်နိုင်သောအမြန်နှုန်း: 0.5m / min - 15m / min 4. Conveyi ...
ကွင်းဆက်ပန်းကန်သယ်ဆောင်သည်မမှန်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူရန်ကွင်းဆက်အပြားပေါ်ကိုသယ်ဆောင်သူများ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သံကြိုးများကြားရှိပြားအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးကရိယာကွင်းဆက်ပန်းကန်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ စက်မှုထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရေးလိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကွေးသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကိုနားလည်နိုင်သည်။
ကွင်းဆက်ပေါ်ကို၏အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို:
1. ကွင်းဆက်အစေး: စံပေါ်ကိုကွင်းဆက်
ပန်းကန်ကွင်းဆက်၏ 2. အကျယ်: 200-1200mm
3. သယ်ဆောင်မြန်နှုန်း: 0.5m / min-15m / min
4. သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: 2500kg / M
5. သံမဏိသယ်ဆောင်ပြားချည်နှောင်၏ 5. အလုပ်လုပ်အပူချိန်: - 20 ℃ - 400 ℃
သံမဏိကွင်းဆက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းသည်စံကြိုးပြားနှင့်မျက်နှာပြင်ရှိခြင်းနှင့်မော်တာအားပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့သောဂီယာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွင်းဆက်ပြားကိုသယ်ဆောင်သူသည် power device (motor)၊ transmission shaft, roller, tensioning device, sprocket, chain, bearing, lubricant, chain plate နှင့်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ယင်း၏မြို့ပတ်ရထားရွေ့လျားမှုအားဖြင့်၎င်း, သယ်ဆောင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်သောသတ္တုပြား။ Multi-line chain ပြားများကိုအပြိုင် အသုံးပြု၍ ကွင်းဆက်ပြားကို conveyor ကျယ်စေရန်နှင့် differential speed ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ မျိုးစုံတန်းကွင်းဆက်ပြားများ၏အမြန်နှုန်းကွာခြားချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မျိုးစုံသယ်ဆောင်ခြင်းကိုအအေးခန်းမပါဘဲတစ်တန်းတည်းသယ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဖျော်ယမကာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဖြည့်ခြင်း၊ သံကြိုးနှစ်ချောင်း၏ ဦး ခေါင်းနှင့်အမြီးကိုပေါင်းစပ်ထားသောကွင်းဆက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပုလင်း (ခ) ကိုယ်ထည်ကိုခွဲခြားနိုင်သည်ပြောင်းလဲနေသောအကူးအပြောင်းအခြေအနေတွင်သယ်ဆောင်လိုင်းတွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ပုလင်းအပြည့်၊ ပုလင်းအပြည့်အဝနှင့်ဖိအားမပါ ၀ င်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။